Dhijitari Kushambadzira & Iyo Impact yeVhidhiyo | Martech Zone
Muvhuro, Kukadzi 10, 2014 Douglas Karr
Mangwanani ano takaendesa mishumo kune mumwe wevatengi vedu anga anesu kwemakore akati wandei. Ivo vane yakakura saiti iyo yakawedzerwa mune inoenderana yekutsvaga traffic ingangoita 200% pamusoro pegore rapfuura uye vane akasiyana infographics uye whitepaper kunyengedza vatengi kunyoresa uye kutanga kutarisa mhinduro yavo. Chinhu chega chatinowana chisipo pane yavo saiti ndeye zvemukati zvemavhidhiyo. Isu tinoziva, chekutanga ruoko, kuti vhidhiyo ndiyo inofanirwa izvozvi kune chero kambani inoda kukwikwidza online.
ichi infographic kubva Vatsananguri Vhidhiyo inopenda yakajeka chaizvo mufananidzo zvine chekuita nemhedzisiro yevhidhiyo pane yako yakazara digitagi kushambadzira. Aya matanho ari kushamisika:
63% yevakuru vakuru vakashanyira nzvimbo yevatengesi mushure mekuona vhidhiyo.
Vhidhiyo pane nzvimbo dzekutengesa yakachengeta vashanyi avhareji yemaminetsi maviri kureba, vakashandura 2% zvimwe uye vakawedzera avhareji kutengeswa kwetikiti ne30%.
68% yevatengesi vepamusoro izvozvi shandisa vhidhiyo sechikamu cheshoko ravo rekushambadzira redhijitari.
Vhidhiyo yakagadziridzwa inowedzera mukana wekuti brand yako ive pa peji rekutanga reGoogle yekutsvaga injini mhinduro ne53 times!
85% yevatengi vane mukana wekutenga mushure mekuona chigadzirwa vhidhiyo.
Tags: digital advertisingecommerce vhidhiyoanotsanangura videoanotsanangura mavhidhiyotsananguroKushambadzira Vhidhiyochigadzirwa vhidhiyoyekutengesa vhidhiyovhidhiyo kutendeuka mwerovhidhiyo seo
Sarudza Zvakatove: Tora uye Ronga Mhinduro
Mar 30, 2017 pa 10: 56 AM
Chikonzero chikuru chekuputika uku mukudiwa imhaka yetekinoroji yedu inogara ichikura. Wese munhu ane smartphones kwavanogona kuona mavhidhiyo ari kuenda. Uye sezvo ivo vachinyatsogutsikana nekuda kweaesthetics nezvimwe zvinhu, vanhu vanowanzotenga zvakawanda mushure mekuona mavhidhiyo. Chinyorwa chikuru nenzira, kunyangwe chiri chekare.